Emeka Offor ewuo ọba akwụkwọ mbụ n’ obodo Buhari (Foto) | odumblog
Emeka Offor ewuo ọba akwụkwọ mbụ n’ obodo Buhari (Foto)
posted on Aug. 18, 2019 at 1:52 pm August 18, 2019
Emeka Offor gara Katsina steeti iji nyochaa nrụzigharị na-aga n’ihu na idozigharị ọbá akwụkwọ ọhaneze Waziri Alhassan dị na Daura, Kastina steeti, obodo Muhammadu Buhari.
Ndị so odogwu ndị Orifite a mụrụ na Kafanchan bụ; Gọvanọ nke Kastina steeti, Aminu Bello Masari na-amụmụ ọnụ ọchị, ya na ụfọdụ ndị enyemaka ya.
Dika akuko si kwuo, mwulighari, na mmezigharị ọba akwukwo a bụ nke si n’aka Sir Emeka Offor Foundation (SEOF) dika ihe o nwere itinye n’ọrụ mmụta n’Africa.
Ka o siri dị, ụfọdụ ndị ntorobịa ndị Igbo nụrụ ozi ahụ gosipụtara mgbarụ ihu nye ihe a Sir Emeka Offor mere, ebe ọtụtụ n’ime ha na-ekwu na a na-esi n’ụlọ mara mma were pụwa ezi.
Otu onye na-achọghị ịkọwa onwe ya mere ka a mata na ndị mmadụ agaghị anabata ọrụ obioma ahụ. N’okwu nke ya, ọ sịrị “Anaghị m ekwu na ọ bụ ihe ọjọọ ịchọ ọdịmma mmadụ mana a na-adị mma si nụlọ were pụọ ezi. ọ gbakwunyere na obodo obula nwere ihe ha choro, ulo ogwu ụmụ anụmanụ na Daura gha kara ịka mma
Otu okenye bụ Fidelis bụ onye kwubiri na Sir Emeka mere ya maka ọdịmma nke onwe ya, o kwuru, “Ha niile na-eje ozi maka ọdịmma nke onwe ha. Gini ka ọba akwukwo ga emere ndi Daura? Kama Ọbá akwụkwọ, ọ gaara emepe ụlọ ebe a na-emepụta Polish akpụkpọ ụkwụ ”
Sir Emeka bụ onye isi oche, ndị na-elekọta Enugu Electricity Distribution Compan (EEDC). A muru ya na Kafanchan, Kaduna State.
Tags:Biafra newBlaze fmbreaking newsDauraEmeka offorEmeka offor builds libraryEmeka offor newsFulaniFuulani herdsmenHerdsmenHerdsmen newsIgbo amakaIgbo NewskanoLatest newslibraryOdumblog newsViral news
odumblog August 18, 2019
Germany agbanye ndị Naịjiria ụgbọ Nwamkpi